Tag: email html | Martech Zone
Tag: email HTML
Tuesday, February 2, 2021 Bọchị Sọnde, Machị 21, 2021 Douglas Karr
Ọchịchịrị mode malitere obere afọ ole na ole gara aga ma nkuchi na-aga n'ihu na-eto. Ọnọdụ gbara ọchịchịrị dị ugbu a n'ofe macOS, iOS, na gam akporo yana ọtụtụ ngwa gụnyere Microsoft Outlook, Safari, Reddit, Twitter, Youtube, Gmail na Reddit. Enweghi nkwado zuru oke na nke ọ bụla, agbanyeghị. Ọchịchịrị mode ebelata ihuenyo ike ojiji na enwekwu na-elekwasị anya. Fọdụ ndị ọrụ na-ekwukwa na ha na-eche mbelata nke anya anya, mana ajuju. Na nso nso a, anyi
Microsoft Office Outlook 2007 Ihe Nlere Ajụjụ Ajụjụ? adi na 2/15/07 Azụ azụ Na nsụgharị ndị gara aga, Outlook jiri injin ntụgharị abụọ rụọ ọrụ? Internet Explorer maka ịgụ ọdịnaya, yana Microsoft Word maka idezi mgbe ị na-ede ozi. Ihe nke a pụtara bụ na ọ bụrụ na ị na-aza ma ọ bụ na-ezigara ozi ịntanetị HTML, ụdị nke Outlook gara aga ga-ebu ụzọ jiri ntụgharị ntụgharị ntụgharị nke ele iji lee ya anya, mgbe ahụ ị ga-agbanwefe na injin kọmputa (Okwu). Anyị mụtara nke a